जसको शरण, उसैबाट पीडित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
जसको शरण, उसैबाट पीडित
नातिबाट बलात्कृत ८२ वर्षीया महिला भन्छिन्, ‘भगवान् हमरा एहन दिन किएक देखएलक ?’
जेष्ठ २१, २०७६ विनु तिम्सिना
विराटनगर — ‘अप्पन लोक बुझिक शरण मांगलेल एकर घरमें अएलहुँ । अपने मरिक चलिगेल हम सेहो मृत्युके प्रतीक्षामें छली अहि उमरमें भगवान् हमरा एहन दिन किएक देखएलक ।’ (बूढाबूढी नै मागेर खाइरहेका थियौं । आफन्त सम्झेर शरण माग्न यसको घरमा आएँ । बूढा मरेर गइहाले म पनि मृत्यु नै पर्खिरहेकी थिएँ । यो उमेरमा किन यस्तो दिन देखायो ईश्वरले मलाई ।)
यो कारुणिक भनाइ ८२ वर्षीया महिलाको हो । वृद्ध ज्यान र कुप्रो परेको ढाडका कारण सजिलो गरी बस्न पनि नसक्ने उनी गत वैशाख ५ गते बलात्कृत भइन् । त्यो पनि नाति नाताको व्यक्तिबाट । घटना भर्खरै सार्वजनिक भएको हो ।
करिब २५ वर्षअघि उनी सिरहाको भगवानपुर गाउँबाट मानसिक सन्तुलन गुमाएका श्रीमान्लाई साथै लिएर मोरङको साविक बुधनगर गाविस (हाल विराटनगर महानगरपालिका १८) मा रहेका आफन्तको घरमा शरण माग्न आएकी थिइन् । सिरहामा पनि अर्काको घरमा मजदुरी गरेर बसेका उनीहरूका सन्तान भएनन् । सम्पत्ति जोड्न पनि रहर भएन । बुधनगरमा उनको काका ससुराको घर थियो ।
उनीहरू सहारा खोज्दै बुधनगर आएका थिए । पाँच वर्षअघि उनका श्रीमान्को मृत्यु भयो । ‘२५ वर्षअघि बुधनगर आउँदा ऊ (पीडक नाति) सानै थियो, मेरै हातले कति पटक उसलाई खाना खुवाएको थिएँ,’ आँसु पुछ्दै उनले भनिन्, ‘आज यसले नै मलाई यस्तो दिन देखायो ।’
पीडकका श्रीमती, दुई छोरी र दुई छोरा छन् । वैशाख ५ गते राति उनीहरू सबै आफन्तको विवाहमा गएका थिए । ‘रात परिसकेकाले म खाना खाइरहेकी थिएँ, पनातिहरू सुतिसकेका थिए, ऊ रक्सी खाएर आएको थियो, खाना खाइरहेकी मलाई उचालेर कोठामा लग्यो अनि मुख थुनेर जबर्जस्ती गर्‍यो,’ उनले सुनाइन् । बलात्कृत भएपछि उनी रगताम्मे भएर मूर्च्छा परिन् । घरमा अरू कोही थिएनन् ।
भोलिपल्ट नातिनी–बुहारीलाई भनिन् । बुहारीले आफ्ना श्रीमान्लाई गाली गरिन् । एक/दुई जना छिमेकी महिलालाई पनि पीडा सुनाइन् । तर न्यायका लागि कसैबाट सहयोग पाइनन् । ‘उल्टै गाली खानुपर्‍यो,’ उनले दुखेसो पोखिन् । घटनास्थल र बुधनगर प्रहरीचौकीको दूरी लगभग एक सय मिटरमात्रै छ । तर उनको वेदना प्रहरी चौकीसम्म पुगेन । उनी भौंतारिँदै सिरहा आफन्तकहाँ पुगिन् ।
यता उक्त घटना एक कान दुई कान गर्दै बुधनगरभरि फैलियो । गाउँका अगुवा ७६ वर्षीय जगदेव दास तक्माले सुनेपछि भने बुधनगर प्रहरी चौकी गएर घटना विवरण सुनाए, पीडित वृद्धालाई खोजिदिन आग्रह गरे । तर प्रहरीले कुनै मतलब गरेन । ‘धेरै खोजतलासपछि उनी सिरहामा रहेको पत्ता लाग्यो । मैले आफ्नै खर्चमा उनलाई झिकाएँ,’ उनले भने ।
स्थानीय प्रहरीले घटनाका विषयमा चासो नदिएपछि गाउँमा पञ्चायती बस्यो । पञ्चायतीमा पीडकले रक्सीको सुरमा गल्ती गरेको स्वीकार गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय रानीले वैशाख २९ गते पीडकलाई पक्राउ गर्‍यो । नागरिकता नभएकाले उमेर पत्ता लगाउन पीडित महिलालाई सोमबार धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठले बताए ।
‘घटना थाहा पाउनेबित्तिकै कारबाही सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तथ्यप्रमाण जुटाइरहेका छौं । अनुसन्धान पूरा भइसकेपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौं ।’ बढी उमेरकी महिलालाई बलात्कार गर्दा दोषीलाई थप सजाय हुने भएकाले पीडित महिलाको आधिकारिक उमेर पत्ता लगाउन परीक्षण गर्नुपरेको हो ।
पीडित महिला घटनापछि छिमेकी जगदेव दासकै घरमा शरण लिएर बस्दै आएकी छन् । बलात्कारको घटनापछि शारीरिक र मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेकी उनलाई छिमेकीको घरमा कति दिन शरण लिएर बस्ने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । ‘प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धान चाँडै सकेर पीडितलाई न्याय दिए उनलाई फेरि सिरहा नै छाडेर आउने थिएँ,’ दासले भने ।
उनले सिरहामा पीडित महिलाका आफन्त भए पनि उनलाई राज्यले बस्ने, खाने व्यवस्था गरिदिनु राम्रो हुने बताए । पीडित महिलालाई सहयोग गरेको भनेर पीडकका परिवार र केही छिमेकी तथा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले समेत आफूलाई दबाब दिने गरेको उनको गुनासो छ ।
बलात्कार घटना बढ्दो
मोरङमा बलात्कारका घटना बर्सेनि बढिरहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५४ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए । जसमा १६ महिला र ३८ बालिका पीडित थिए । २०७३/७४ मा २४ महिला र ४२ बालिका पीडित बनेका घटना दर्ता भए । २०७४/७५ मा बलात्कारसम्बन्धी ८० वटा घटना प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
जसमध्ये ३० महिला, ३ बालक र ४७ बालिका पीडित छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ८७ जना बलात्कार भएको घटना दर्ता भएको छ, जसमा २९ महिला र ५८ बालिका पीडित छन् । बलात्करका यी अधिकांश घटनामा पीडक आफन्त र छिमेकी नै पाइने गरेको महिला सेल प्रमुख जमुना बस्नेतले बताइन् । ‘ज्येष्ठ महिला बलात्कारमा परेको घटना आउने गरे पनि सबैभन्दा बढी बालिका पीडित देखिन्छन्,’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०७:२८
शिक्षिकाको पिटाइले ५ छात्राको हात भाँचियो
लठ्ठी प्रहारले १४ विद्यार्थी घाइते भएका थिए
पक्राउपछि शिक्षिकालाई लिबाङ ल्याउने तयारी
जेष्ठ २१, २०७६ दुर्गालाल केसी, काशीराम डाँगी
दाङ/रोल्पा — जेठ १२ गते आइतबार । रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका–८ मगरगोरीस्थित भानु आधारभूत विद्यालयमा प्रार्थना सुरु हुँदै थियो । कक्षा ७ की विमला रोका घरको काम सकेर हतारहतार विद्यालय पुगिन् । नुहाएर राम्ररी कपाल पनि कोर्न भ्याएकी थिइनन् ।
शिक्षिकाको कुटाइबाट हात नचल्ने भएपछि उपचारका लागि दाङको तुलसीपुर आएका रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका–८, मगरगोरीस्थित भानु आधारभूत विद्यालयका छात्रा ।तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर
उनलाई देखेपछि शिक्षिका लक्ष्मी पुनले किन कपाल नकोरेको भनेर लठ्ठी चलाउन थालिन् । अरू विद्यार्थी पनि आउने क्रम चलिरह्यो । पुनले ढिला आउनेलाई प्रश्न सोधिन् । जवाफ सुनिन् । र, एकोहोरो लौरो बर्साउन थालिन् । उपस्थित अन्य शिक्षक मूकदर्शक बने ।
शिक्षिकाको ‘लाठीचार्ज’ ले त्यो दिन विद्यालय परिसर आन्दोलनस्थल जस्तै बन्यो । शिक्षिकाको कुटाइबाट १४ विद्यार्थी घाइते भए । प्रावि तहकी शिक्षिका पुनले पिटेका १४ मध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर थियो । उनीहरू दिनभर चोट सहेर कक्षामै बसे । ‘अन्धाधुन्ध लठ्ठीले पिट्नुभयो । हामी केही बोल्न सकेनौँ,’ पीडित विमलाले भनिन्, ‘हात दुखेर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन ।’ साँझ घर पुग्दा हात सुन्निएको थियो ।
विद्यार्थी कुटेको खबर पाएपछि प्रधानाध्यापक झगबहादुर भण्डारी र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुमबहादुर पुन साँझ अभिभावकको घरघर पुगे । तालिममा गएकाले भण्डारी दिउँसो विद्यालयमा थिएनन् । विद्यार्थीको चोट देखेर उनी तर्सिए । उपचारका लागि अस्पताल लैजाने र भोलि छलफल गर्ने भन्दै उनी फर्किए । अर्को दिन अभिभावकले विद्यालय तालाबन्दी गरे । कुटपिटमा संलग्न शिक्षिकालाई सेवाबाट बर्खास्त र उपचार खर्च उनैले बेहोर्ने मौखिक सहमतिपछि ताला खुल्यो ।
विद्यालय खुले पनि चित्त नबुझेका अभिभावकले इलाका प्रहरी होलेरीमा उजुरी दिए । प्रहरीले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो । छलफलमा राम्रोसँग उपचार गराउने, खर्च शिक्षिकाले बेहोर्ने, शिक्षिकालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे थप कारबाही गर्ने सहमति भयो । ‘स्थानीयस्तरमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा नभएकाले तुलसीपुर पठाइएको हो,’ प्रधानाध्यापक भण्डारीले भने, ‘शिक्षिकालाई कारबाही थालिएको छैन । सबैको सल्लाहअनुसार के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगौँला ।’ शिक्षिकाले विद्यार्थी कुटेको स्विकारेको र उपचार पनि उनैले गरेकाले केही समय पर्खिएको उनले बताए ।
पाँच जनाको हातमा प्लास्टर
शिक्षिकाको कुटाइबाट आइतबार तुलसीपुरस्थित सहारा पोलिक्लिनिकमा कक्षा ८ की भीमकुमारी बाँठा, गौरी घर्ती, शान्ता नेपाली, कक्षा ६ की निर्मला पुन र ७ की विमला रोकाको हातमा प्लास्टर गरिएको छ । उनीहरूको नाडीको जोर्नी सुन्निएको, लिगामेन्ट च्यातिएको, सुन्निएको र हड्डी चर्किएको देखिएपछि प्लास्टर गर्नुपरेको डा. घनश्याम शर्माले जानकारी दिए ।
‘सबै विद्यार्थी सलमा हात झुन्ड्याएर आएका थिए । धेरै दिनदेखि उपचार पाएका रहेनछन्,’ डा. शर्माले भने, ‘समयमा उपचार गरेको भए छिट्टै निको हुन्थ्यो । ढिला भएकाले सुन्निएको छ । पूरै निको हुन तीन साता जति लाग्छ ।’ हात पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन प्लास्टर गर्नुपरेको उनले बताए ।
शिक्षिकाको कुटाइबाट एकै दिन १४ विद्यार्थी घाइते भएपछि विद्यालयका बालबालिका त्रस्त छन् । कुटाइबाट कक्षा १ का प्रेम पुन, कक्षा ४ का सन्तोष बुढामगर, कक्षा ७ की दीपा बाँठा, कक्षा ५ का वीरबहादुर घर्ती र अरुणा पुन, कक्षा ६ का सुशीला विक, पूर्णकली घर्ती र विपना घर्ती तथा कक्षा ८ की मनकुमारी घर्ती घाइते छन् । सबै विद्यार्थी शिक्षिकाबाट त्रस्त रहेको घाइतेले सुनाए ।
डरैडरमा एक सातासम्म पीडा सहेर बसेको कक्षा ८ की शान्ता नेपालीले बताइन् । ‘डरले मिससँग केही बोल्न सकेनन् । गाउँमै उपचार गर्न थाल्यौँ । सञ्चो भइहाल्छ भन्ने भयो । तर दुखेर हात चलाउन नसक्ने भयो, सुन्निँदै गयो,’ उनले भनिन्, ‘हात झुन्ड्याएर पनि विद्यालय गयौँ । पढ्न मन लाग्दैनथ्यो । सबैले बिस्तारै सञ्चो हुन्छ भने । तर भित्र धेरै चोट रहेछ । अन्त्यमा प्लास्टर नगरी नहुने भयो ।’ अरू सबै विद्यार्थी शिक्षिका पुनदेखि त्रस्त रहेको उनले बताइन् ।
पुन प्रावि तहकी निजी स्रोत शिक्षिका हुन् । उनी एक वर्षअघि माक्रै नियुत्त भएकी थिइन् । उनले यसअघि पनि विद्यार्थी कुट्ने गरेको पीडितले बताए । केही समयअघि कक्षा ३ का छात्र नरबहादुर पुनलाई पिटेर कानको जाली फुटेको थियो । विद्यार्थीप्रति शिक्षिकाको व्यवहार उचित नभएकोबारे यसअघि पनि गुनासो आएको गाउँपालिका शिक्षा शाखा स्रोतव्यक्ति कुलराज आचार्यले जानकारी दिए ।
‘पहिले पनि बालबालिका कुटेका घटना रहेछन् । अहिले प्रहरीमा पुगेपछि मात्र हामीलाई थाहा भयो,’ उनले भने, ‘शिक्षिकालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने र बालबालिकाको उपचार खर्च बेहोर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार काम हुन ढिलाइ भएछ ।’ विद्यालयमा २ सय १८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
'सालको लठ्ठीले पिटेँ’
त्यस दिन १० शिक्षकमध्ये तीन शिक्षिका मात्र उपस्थित थिए । अन्य सात जना कोही बिदामा र कोही विद्यालयको काममा गएका थिए । शिक्षिका पुन निमित्त प्रधानाध्यापक थिइन् । विद्यार्थी समयभन्दा ढिला आएका कारण निमित्त प्रअका हैसियतले सजाय दिएको पुनले स्विकारिन् ।
‘त्यस दिन म निमित्त प्रअ थिएँ । १० बजे आउनुपर्नेमा विद्यार्थी १०ः२० मा आए । त्यसपछि सालको लठ्ठीले हातमा पिटेँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति धेरै चोट लाग्ला भन्ने सोचेकै थिइनँ । तर लठ्ठी अलि बलियो भएकाले धेरै चोट लागेछ ।’ घटना भइसकेपछि आफूले गल्ती महसुस गरेर माफी मागेको र उपचार खर्च बेहोर्दै आएको उनले बताइन् । ‘जे नहुनु थियो, भइहाल्यो भनेर माफी मागिसकेकी छु ।’ दाङमा उपचार गर्न लगिएका विद्यार्थीसँग शिक्षिका पुनका बुबा पनि गएका छन् ।
कुटपिट आरोपमा शिक्षिका पुनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको रोल्पाका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले बताए । ‘विद्यार्थीमाथि अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो,’ उनले भने, ‘के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे अनुसन्धान जारी छ ।’ शिक्षिका पुनलाई होलेरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले सोमबार नियन्त्रणमा लिएको छ ।
शिक्षिकालाई सदरमुकाम लिबाङ ल्याउने तयारी भएको प्रहरीले जानकारी दियो । घटनाबारे जानकारी पाएपछि सत्यतथ्य बुझ्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधि खटाएको रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढामगरले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०७:२७